Nuciferine အမှုန့် (475-83-2) hplc≥98% | AASraw အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / စက်ရုံ Extract / Nuciferine အမှုန့်
SKU: 475-83-2. အမျိုးအစား: စက်ရုံ Extract
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Nuciferine မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (475-83-2) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Nuciferine အမှုန့် အပင် Nymphaea caerulea နှင့် Nelumbo nucifera အတွင်းတွေ့ရှိရထားတဲ့ alkaloid ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ dopamine အဲဒီ receptor blockade.It နှင့်ဆက်စပ်အရေးယူတဲ့ပရိုဖိုင်းကိုသက်သာခြင်း, hypothermia, ptosis, နှင့် (ပိုမိုမြင့်မားဆေးများအတွက်) catalepsy induces ရှိပါတယ်; ဒါကြောင့်ရှောင်ရှားခြင်းတုံ့ပြန်မှု, စိတ်ကြွဆေးအဆိပ်အတောက်များနှင့် stereotypy အေးစက်, အလိုအလျောက်မော်တာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Nuciferine အမှုန့်ကိုလည်းမော်ဖင်းအကိုက် analgesia potentiate လိမ့်မည်။ ကြွက်အတွက်ပျမ်းမျှသေစေလောက်ထိုး 289 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ apomorphine မှဖွဲ့စည်းပုံဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Nuciferine အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Nuciferine အမှုန့်
ကိုယ်အလေးချိန်သံသရာအတွက်ကုန်ကြမ်း Nuciferine အမှုန့်
ကုန်ကြမ်း Nuciferine အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Nuciferine အမှုန့်အပင်များ Nymphaea caerulea နှင့် Nelumbo nucifera အတွင်းတွေ့ရှိရထားတဲ့ alkaloid ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ dopamine အဲဒီ receptor blockade.It နှင့်ဆက်စပ်အရေးယူတဲ့ပရိုဖိုင်းကိုသက်သာခြင်း, hypothermia, ptosis, နှင့် (ပိုမိုမြင့်မားဆေးများအတွက်) catalepsy induces ရှိပါတယ်; ဒါကြောင့်ရှောင်ရှားခြင်းတုံ့ပြန်မှု, စိတ်ကြွဆေးအဆိပ်အတောက်များနှင့် stereotypy အေးစက်, အလိုအလျောက်မော်တာလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ Nuciferine အမှုန့်ကိုလည်းမော်ဖင်းအကိုက် analgesia potentiate လိမ့်မည်။ ကြွက်အတွက်ပျမ်းမျှသေစေလောက်ထိုး 289 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ apomorphine မှဖွဲ့စည်းပုံဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
1.Nuciferine ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဟာအဓိကတက်ကြွ Anti-hyperlipidemia ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း N. nucifera Gaertn ၏အရွက်ကနေ aporphine alkaloid, Anti-hypotensive, Anti-arrhythmic နှင့်အင်ဆူလင် secretagogue လှုပ်ရှားမှုများသည်။
2 ။ Nuciferine အမှုန့်အသည်း steatosis နှင့်ဒဏ်ရာသကဲ့သို့ကောင်းစွာ HFD-သွေးဆောင် dyslipidemia ameliorating မှတဆင့်, အဝလွန်ခြင်း-related ရောဂါများကုသမှုများအတွက်အရေးပါသောမူးယစ်ဆေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ Nuciferine ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကျောက်ကပ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတူ hyperuricemia များ၏ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ကုသမှုများအတွက်အလားအလာဖြစ်နိုင်သည်။
4 ။ Nuciferine အမှုန့်, endothelium-မှီခိုနှင့် -independent ယန္တရားများနှစ်ဦးစလုံးကနေတစ်ဆင့်တစ်ဦး vasorelaxant အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် Nuciferine အမှုန့်ထစ်အငေါ့ vasoconstriction နှင့်ဆက်စပ်သွေးကြောရောဂါများအပေါ်တစ်ဦးကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
5 ။ Nelumbo nucifera ထံမှထုတ်ယူ Nuciferine ကုန်ကြမ်းအမှုန့်, Nelumbo nucifera ၏ Anti-ဆီးချိုသက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြ, ပိုတက်စီယမ်-adenosine triphosphate channel များကိုပိတ်ပြီးအားဖြင့်အထီးကျန် islets အတွက်အင်ဆူလင် Secret ၏နှစ်ဦးစလုံးအဆင့်လှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်။
6 ။ Nuciferine အမှုန့် (CAS 475-83-2) Non-သေးငယ်တဲ့ဆဲလ်အဆုတ်ကင်ဆာအတွက် Wnt / β-catenin အချက်ပြပါဝင်သောနီကိုတင်း၏အကျိတ်-မြှင့်တင်ရန်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်, က NSCLC ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုထုံးတစ်ခုအလားအလာဝတ္ထုအခြားရွေးချယ်စရာတွေ့ရမယ်။
ကုန်ကြမ်း Nuciferine အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
ထုတ်ကုန်ဖလားကိုအပေါ်ဖော်ပြထားနှင့်ဖလားကိုတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်ထားအဖြစ်ပေးသိမ်းဆည်းခြင်း, ထုတ်ကုန် 24 လ (2-8C) မှတက်ဘို့သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
တတ်နိုင်သမျှ, သငျသညျထိုနေ့ရက်တွင်ဖြေရှင်းချက်ပြင်ဆင်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ သငျသညျကိုကြိုတင်စတော့ရှယ်ယာဖြေရှင်းချက်တက်စေရန်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်သို့သော်, ငါတို့သည်သင်တို့ -20C မှာတင်းကျပ်စွာတံဆိပ်ခတ်ဖလားအတွက် aliquots အဖြစ်ဖြေရှင်းချက်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအထိနှစ်ပတ် useable ဖြစ်လိမ့်မည်။ အသုံးမပြုမီနှင့်ကြိုတင်ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်မှာအနည်းဆုံး 1 နာရီများအတွက်အခန်းအပူချိန်ဖို့ equilibrate ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းအကြံပြုဘူးကိုဖွင့်လှစ်ရန်။
ထုတ်ကုန်များ၏ထုပ်ပိုးသည့်ဖလားကို၏လည်ပင်းသို့မဟုတ်ဦးထုပ်မှလိုက်နာရန်သဘာဝဒြပ်ပေါင်းများအတွက်ရရှိလာတဲ့, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းဇောက်ထိုးလှည့်ကြပေမည်။ ယင်း၏ထုပ်ပိုးထဲကဖလားကို ယူ. ညင်သာစွာဒြပ်ပေါင်းများဘူး၏အောက်ဆုံးမှကျစေရန်ကိုလှုပ်။ အရည်ထုတ်ကုန်များအတွက်, 200-500 RPM မှာ centrifugal ဘူး၏အောက်ဆုံးမှာအရည်ကိုစုသိမ်းရန်။ ကိုင်တွယ်စဉ်ကအရှုံးသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။
စသည်တို့နှင့် Alkaloid Nuciferine မှုန့် Vivo စရိုက်လက္ခဏာတွေအတွက်
သန့်ရှင်းသောကြာ (Nelumbo nucifera) အများအပြား phytochemicals ပါရှိသည်နှင့်လူ့အသုံးပြုမှုသမိုင်းကြောင်းရှိပါတယ်။ အစီရင်ခံစိတ်သက်ရောက်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ရသောဒြပ်ပေါင်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်, ကျနော်တို့ဖော်ထုတ် phytochemicals ၏ silico ဟောကိန်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Nuciferine ကုန်ကြမ်းအမှုန့်, Nelumbo nucifera နှင့် Nymphaea caerulea တစ်ခု alkaloid အစိတ်အပိုင်း, antipsychotic ဒြပ်ပေါင်းများဆင်တူတဲ့ဟောကိန်းထုတ်မော်လီကျူးပရိုဖိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုစသည်တို့နှင့် Vivo pharmacological assay အတွက်သုံးပြီး Nuciferine အမှုန့်ရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့။
Nuciferine ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ပထမဦးဆုံးတူညီ ensemble ချဉ်းကပ်နည်းကို အသုံးပြု. silico အတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ပါတယ်နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျု၏ Psychoactive မူးယစ်ဆေးစစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်သုံးပြီးနောက်ထပ်စရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ Nuciferine အမှုန့်ထို့နောက်ဦးခေါင်း-Twitch တုံ့ပြန်မှု, Pre-သွေးခုန်နှုန်းတားစီး, hyperlocomotor လှုပ်ရှားမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးခွဲခြားဆက်ဆံမှု Paradigm အတွက် Vivo အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။
Nuciferine အမှုန့်ရှယ်ယာ aripiprazole ကဲ့သို့ antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများဆင်တူတဲ့အဲဒီ receptor ပရိုဖိုင်း။ Nuciferine ကုန်ကြမ်းအမှုန့် 5-HT2A, 5-HT2C နှင့် 5-HT2B, 5-HT7, D2, D5 နှင့် 5-HT6, 5-HT1A နှင့် D4 receptors မှာ agonist မှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist မှာပြောင်းပြန် agonist မှာရန်ကြီး နှင့် dopamine Transporter inhibited ။ antipsychotic မူးယစ်ဆေးအရေးယူမှုမှသက်ဆိုင်ရာကြွက်မော်ဒယ်များခုနှစ်, Nuciferine အမှုန့်ဦးခေါင်းကို-အကွောဆှဲတုံ့ပြန်မှုများနှင့် clozapine ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အစားထိုးတဲ့ 5-HT2A agonist ၏ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလှုံ့ဆော်မှုသက်ရောက်မှု, ပိတ်ဆို့, တိုးမြှင့်စိတ်ကြွဆေးသွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှု, ဘယျလိုမှမ phencyclidine (PCP) locomotor လှုပ်ရှားမှု -induced နှင့် catalepsy ၏ induction မပါဘဲ prepulse တားစီး၏ PCP-သွေးဆောင်ပြတ်တောက်ကယ်လွှတ်တော်မူ၏။
Nuciferine ကုန်ကြမ်းအမှုန့်များ၏မော်လီကျူးပရိုဖိုင်းကိုဆင်တူပေမယ့် Nuciferine အမှုန့် atypical antipsychotic ကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များရှိကြောင်းအကြံပြုအများအပြားအတည်ပြု antipsychotic မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူမျှဝေဖို့တူညီမဟုတ်ခဲ့ပေ။
Nuciferine ကုန်ကြမ်း Powder (CAS 475-83-2)
ကုန်ကြမ်း Nuciferine အမှုန့်စျေးကွက်
AASraw ပေးသွင်းထံမှ Nuciferine အမှုန့် (CAS 475-83-2) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
Nuciferine ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း:
PolypodiuM Extract အမှုန့်